तेल लिएर हल्का खैरो (लगभग पारदर्शी) गाढा खैरो देखि (लगभग कालो) एक रंग भएको एउटा तेल दहनशील तरल छ। , थोरै मध्यम र गंभीर विभाजित घनत्व अनुसार।
वर्तमानमा, सम्भव तेल बिना आधुनिक संसार कल्पना गर्नुहोस्। यसलाई विभिन्न परिवहन, विभिन्न उपभोक्ता सामान, औषधी र अन्य कुराको निर्माण को लागि कच्चा माल लागि इन्धन को मुख्य स्रोत हो। र कसरी तेल झिकिएको छ?
प्राकृतिक ग्याँस संग तेल reservoirs भनिन्छ porous चट्टानहरु संचित। तिनीहरूले फरक हुन सक्छ। राम्रो कलेक्टर को बलुआ तह, माटो र shale को तहहरू बीच स्थित छ जो प्रतिनिधित्व मानिन्छ। यसबाट तेल र ग्याँस को रिसाव तिरस्कार भूमिगत reservoirs।
एक पटक खनिज पाइन्छन्, गठन, गुणस्तर आफ्नो स्टक को एक मूल्यांकन र प्रक्रिया बोट गर्न सुरक्षित हटाउन तरिका र परिवहन विकास गरे। अनुमानित भने तेल उत्पादन यस क्षेत्रमा र ग्यास उत्पादन एक लागत प्रभावी छ, स्थापना उत्पादन उपकरण सुरु हुन्छ।
जहाँ तेल झिकिएको छ प्राकृतिक reservoirs, यो यसको कच्चा अवस्थामा छ। सामान्यतया, यो दहनशील तरल ग्याँस र पानी संग मिश्रित। अक्सर तिनीहरूले तेल unequipped वेल्स गर्न विस्थापित छ जो को प्रभाव अन्तर्गत, उच्च दबाबमा छन्। यो समस्या निम्त्याउन सक्छ। कहिलेकाहीं दबाव विशेष पंप को स्थापना आवश्यक ताकि सानो छ।
तेल उत्पादन प्रक्रिया तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
को wellbore तिर गठन मार्फत तरल पदार्थ को आन्दोलन। यसलाई द्वारा प्राकृतिक वा artificially सिर्जना दबाव फरक बाहिर छ।
तल देखि मुख - राम्रो तरिकाले मार्फत तरल पदार्थ को आन्दोलन।
जुदाई, शुद्धीकरण को सतह मा ग्याँस र पानी तेल सङ्कलन। त्यसपछि तरल पदार्थ प्रक्रिया बोट गर्न ओसारपसार गरिन्छ।
त्यहाँ जो खनिज जम्मा (भूमि, को प्रकार मा निर्भर तेल विभिन्न विधिहरू छन् समुद्र तल्ला) प्रकार कलेक्टर deepness। साथै, विधि प्राकृतिक जलाशय खाली रूपमा फरक हुन सक्छ। यो उपकरण subsea प्रतिष्ठानहरु आवश्यक भएकोले एक जटिल प्रक्रिया - यो उल्लेख हुनुपर्दछ समुद्री तेल छ।
तेल कसरी निकाल्न? यो उद्देश्य लागि, दबाव शक्ति प्राकृतिक वा कृत्रिम उत्पन्न। ऊर्जा को जलाशय मा राम्रो को सञ्चालन गर्ने फोहरा भनिन्छ। यस मामला मा, भूमिगत पानी, ग्याँस को दबाब, तेल शीर्षमा, अतिरिक्त उपकरण जुटाउने आवश्यकता बिना rises। तर, फोहरा विधि मात्र प्राथमिक खनिज निकासी लागि, दबाब धेरै छ, र तरल माथिको उठाने को सक्षम छ जब प्रयोग भएको छ। भविष्यमा, अतिरिक्त उपकरण आवश्यकतालाई पूर्ण तेल को खाली गर्न।
छहरा सबैभन्दा आर्थिक विधि हो। तेल प्रवाह समायोजन विशेष वाल्व, wellhead छाप पदार्थ वितरण राशि नियन्त्रण जो सेट गरिएको छ।
माध्यमिक र tertiary विधिहरू प्राथमिक निकासी पछि प्रयोग गरिन्छ, कुशलतापूर्वक क्षेत्र फाइदा लिन।
, प्राथमिक माध्यमिक र tertiary विधिहरू
तेल उत्पादन को प्राकृतिक प्रक्रिया मा एक stepwise विधि प्रयोग गरिएको छ:
प्राथमिक। तरल यसपछी भूमिगत, ग्याँस विस्तार देखि गठन गरिएको छ जो र जलाशय, उच्च दबाब आपूर्ति गरिएको छ। तेल रिकभरी कारक को यो विधि संग (CIN) लगभग 5-15% छ।
माध्यमिक। प्राकृतिक दबाव अब राम्रो मा तेल उचाल्न पर्याप्त छ जब यो विधि प्रयोग गरिएको छ। यस मामला एक माध्यमिक प्रक्रिया बाहिर बाट ऊर्जा आपूर्ति छ जसमा। यो इंजेक्शन पानी, प्राकृतिक ग्याँस वा बित्दै जाँदा रूपमा सेवा गर्दैछन्। जलाशय रक र माध्यमिक तेल रिकभरी विधि को तेल विशेषताहरु आधारमा 30% पुग्यो, र कुल मूल्य - 35-45%।
Tertiary। यो विधि उत्पादन वृद्धि गर्न तेल को गतिशीलता वृद्धि छ। एउटा तरिका - यो तरल पदार्थ हीट जसद्वारा कारण जलाशय चिपचिपाहट घट्छ यो TEOR। यो, सबै भन्दा सामान्यतः प्रयोग बाफ गर्न। कम सामान्यतः सीधा गठन मा, ठाउँमा तेल आंशिक दहन गरिन्छ। तर, यो विधि छैन धेरै प्रभावकारी हुन्छ। परिवर्तन गर्न को सतह तनाव विशेष surfactant (वा surfactants) तेल र पानी बीच प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Tertiary तेल रिकभरी विधि लगभग अर्को 5-15% को वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ। यो विधि तेल लाभदायक हुन जारी मात्र घटनाको प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ, tertiary विधि प्रयोग तेल को मूल्य र यसको हटाउने लागत मा निर्भर गर्दछ।
यांत्रिक विधि: ग्याँस लिफ्ट
तेल उचाल्न ऊर्जा बाहिर बाट आपूर्ति गरिएको छ भने, त्यसपछि यो विधि यंत्रीकृत खानी भनिन्छ। को खुम्च्याउने र पंप: यो दुई प्रकार विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक विधि यसको आफ्नै विशेषताहरु छन्।
को खुम्च्याउने पनि ग्यास लिफ्ट भनिन्छ। यो विधि जहाँ यो तेल मिश्रित छ wellbore, मा ग्याँस इंजेक्शन समावेश छ। फलस्वरूप, मिश्रण को घनत्व घट्छ। Bottomhole दबाव पनि कम जलाशय बन्छ घट्छ। यो सबै सतहमा तेल को प्रवाह गर्न जान्छ। कहिलेकाहीं दबाव ग्याँस छिमेकी तहहरू देखि आपूर्ति गरिएको छ। यो "प्राकृतिक दबाव ग्याँस-लिफ्ट" भनिएको छ।
पुरानो क्षेत्रहरू लागू गरिन्छ र हावा-लिफ्ट सिस्टम जो हावा प्रयोग गरिन्छ। तर, यो विधि दहन ग्याँस आवश्यक छ, र नाली जंग क्षति गर्न एक कम प्रतिरोध छ।
तेल लागि ग्याँस लिफ्ट पश्चिमी साइबेरिया, पश्चिमी काजाकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान प्रयोग गरिएको।
यांत्रिक विधि: पंप को प्रयोग
जब पम्पिंग प्रक्रिया एक निश्चित गहिराई मा पंपों हटाइएका। उपकरण विभिन्न प्रकार विभाजन गरिएको छ। सबै भन्दा व्यापक प्रयोग रड पम्प।
तेल यो विधि द्वारा झिकिएको छ, विचार गर्नुहोस्। निम्नानुसार यस यन्त्रको सञ्चालनको सिद्धान्त हो। जो भित्र तल प्वाल पाइप चूषण वाल्व र सिलेंडर प्रबन्ध छन्। एक दबाव वाल्व संग अन्तिम सेट plunger मा। तेल आन्दोलन कारण plunger को घूमएर आन्दोलन गर्न बाहिर। चूषण र छुट्टी वाल्व एकांतर द्वारा खोल्ने-बन्द।
प्रदर्शन रड पम्प लगभग 500 घन मीटर छ। एम 200-400 मिटर को एक राम्रो गहिराई मा र 3200 मिटर गहिराइमा संग / दिन - 20 घन। एम / दिन।
र rodless जम्मा तेल उत्पादन को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस मामला मा, उपकरण गर्न wellbore मार्फत बिजुली आपूर्ति गरिएको छ। यो एक विशेष केबल प्रयोग गरेको छ। यो ऊर्जा-धारा अर्को प्रकार (कूलेंट, संकुचित ग्याँस) पनि लागू हुन सक्छ।
रूस मा, सबै भन्दा अक्सर अपकेंद्र बिजुली पंप को फारम प्रयोग। संग तेल को सबै भन्दा यस्तो उपकरण प्रयोग गरेर झिकिएको छ। सतह मा विद्युत पंपों प्रयोग गर्दा व्यवस्थापन स्टेशन र एक ट्रांसफर्मर सेट गर्नुपर्छ।
यो प्राकृतिक reservoirs देखि तेल उत्पादन रूपमा छलफल भएको थियो। यो विकास गति परिचित हुनुपर्छ। सुरुमा, मध्य 70-एँ सम्म।, तेल उत्पादन लगभग हरेक दशक दुगुना छ। विकास को गति र त्यसपछि कम सक्रिय हुन्छन्। उत्पादन को सुरुदेखि पम्प्ड कि भएको तेल को मात्रा (को 1850s देखि।) 1973 को लागि 41 अर्ब टन, को 1965-1973 का मा गिर लगभग आधा जो totaled।
आज विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादकहरु जस्तै साउदी अरब, रूस, इरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, मेक्सिको, क्यानाडा, भेनेजुएला, काजकस्तान रूपमा देशहरूमा छन्। यी राज्य "कालो सुन" को मुख्य बजार हो। यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा तेल उत्पादन शीर्ष स्थान मा छैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ, तर देश अन्य राज्य अमेरिका मा ठूलो जम्मा किनेको छ।
ठूलो तेल र ग्याँस पूल, जसमा तेल र ग्याँस फारसी खाडी, मेक्सिको को खाडी, दक्षिण कैस्पियन, पश्चिमी साइबेरिया, अल्जेरिया शर्करा र अन्य छन्।
तेल एक छ गैर-अक्षय स्रोत। बारेमा 52-260 अर्ब व्यारेल - 1200 अर्ब व्यारेल र पता नलागेका को ज्ञात जम्मा को विस्थापन। कुल तेल रिजर्व, 100 वर्ष को लागि, आधुनिक पर्याप्त यसको खपत खातामा लिएर। यो बावजुद, "कालो सुन" उत्पादन मा रूस वृद्धि को योजना मा।
जहाँ तेल सबैभन्दा ठूलो मात्रा मा उत्पादन देश, निम्न:
रूस मा तेल
रूस अग्रणी मध्ये एक छ तेल उत्पादन देशहरूमा। यसलाई व्यापक मात्र देशमा प्रयोग गरिएको छैन, एक ठूलो भाग विभिन्न देशहरुमा निर्यात गरिएको छ। रूसी तेल जहाँ झिकिएको छ? सबै भन्दा ठूलो जम्मा खन्टी-खगरिया स्वायत्त जिल्ला, Yamalo-Nenets स्वायत्त जिल्ला र Tatarstan आज फेला छन्। यी क्षेत्रहरु उत्पादित तरल पदार्थ को कुल मात्रा को 60% भन्दा छ। साथै, इर्कुत्स्क क्षेत्र र Yakutia को गणतन्त्र - जहाँ तेल मात्रा मा वृद्धि मा उत्कृष्ट परिणाम देखाउन, रूस झिकिएको छ ठाउँ। प्रशान्त महासागर - यो नयाँ निर्यात गन्तव्यहरू साइबेरिया को विकास संग जोडिएको छ।
तेल मूल्य आपूर्ति र माग को अनुपात देखि गठन गरिएको छ। तर, यो मामला मा यसको peculiarities छ। माग लगभग अपरिवर्तित रहन्छ र मूल्यहरू को गतिशीलता मा सानो प्रभाव छ। निस्सन्देह, यो हरेक वर्ष बढ्दै छ। तर मूल्य निर्धारण मा मुख्य कारक प्रस्ताव छ। लागत एक स्पाइक यसको परिणाम एउटा सानो गिरावट।
तेल माग बढ्छ लागि वाहनहरु को संख्या र समान उपकरण संग। तर क्षेत्र बिस्तारै माथि सुखाने छ। यो सबै, विशेषज्ञहरु अनुसार, अन्ततः तेल संकट गर्न, माग टाढा आपूर्ति नाघ्यो जब नेतृत्व गर्नेछन्। त्यसपछि मूल्यहरु नाटकीय ऊंची उडान भरना।
यो पनि तेल को मूल्य वैश्विक अर्थव्यवस्था सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति साधन मध्ये एक छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। आज यो वरिपरि 107 डलर प्रति बैरल छ।
पाक DA (पाक DA): नयाँ पुस्ता को रूसी रणनीतिक बमवर्षक-रकेट वाहक
तेल रन के हुनेछ? पर्याप्त तेल कति छ? तेल कम्पनीहरु
दूध मा चावल दलिया व्यंजनहरू
कसरी टर्की उड गर्न: हामी यात्रा गर्ने योजना
टर्की मा वर्णन रिसोर्ट्स: कहाँ बाँकी जान
घाँटी मा लसीका नोड्स: कारणहरू, निदान, उपचार
कालो शर्ट - सबै अवसरका लागि लुगा
Snacking खुशी छ - "Buterbrodsky पट्टी" जाने!
बाल को चीरना: को फाइदा र बेफाइदा। Laminating बाल: समीक्षा, वर्णन र प्रक्रियाहरु विशेष गरी
रोचक र बुझ्ने: विभिन्न आँखा रंग संग मान्छे
टर्की सैनिकको नाम के हो?